दुई अर्ब पाउन्ड खर्च गरेर लन्डनलाई विश्वकै उत्कृष्ट पैदलयात्रु सहर बनाइँदै ::Nepali TV
You are here : Home News दुई अर्ब पाउन्ड खर्च गरेर लन्डनलाई विश्वकै उत्कृष्ट पैदलयात्रु सहर बनाइँदै
दुई अर्ब पाउन्ड खर्च गरेर लन्डनलाई विश्वकै उत्कृष्ट पैदलयात्रु सहर बनाइँदै
लन्डन पैदलयात्रुका लागि विश्वकै सबभन्दा सुविधाजनक सहर बन्ने तयारीमा लागेको छ।
लन्डनका मेयर सादिक खानले सहरभरि साइकल चलाउने र हिँड्ने बाटो निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। यस निम्ति यातायात क्षेत्रमा पहिलोपटक ‘वाकिङ एन्ड साइक्लिङ’ आयुक्त नियुक्त गरिएको छ।
आयुक्त विल नोर्मनले सहरको ‘पैदलयात्रु कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा लन्डनका सडक पुनर्निर्माण गरेर बढीभन्दा बढी साइकल तथा पैदलमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ। यसमा करिब २ अर्ब २० करोड पाउन्ड (तीन खर्ब रुपैयाँ) लगानी गरिनेछ। यसमा साइकल र पैदलमार्ग निर्माणदेखि वायु गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रमसमेत पर्छन्।
लन्डनले हिँड्ने, साइकल चलाउने र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेको संख्या बढाउन यस्तो कार्ययोजना ल्याएको हो।
अध्ययनअनुसार लन्डनका मान्छे सडकको जोखिमले हिँड्न डराउँछन्। हाल लन्डनमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने ६३ प्रतिशत छन्। सन् २०४१ सम्म यो संख्या ८० प्रतिशत पुर्याउने मेयर खानको योजना छ।
यो योजना लागू गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य, इङ्ल्यान्ड (पिएचई) सँग सहकार्य गरिएको छ। यसले छोटो दुरीको यात्रानिम्ति लन्डन कसरी उत्कृष्ट, आकर्षक र रमणीय पैदलयात्रुमैत्री सहर हुनसक्छ भन्नेबारे योजना बनाएको छ।
आयुक्त नोर्मनले सार्वजनिक गरेको ‘वाकिङ एक्सन प्लान’ ले मुख्य रूपमा पाँच उद्देश्य राखेको छ।
१. हिँड्न सहज बाटो डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापन। सार्वजनिक खुला ठाउँ धेरै बनाउने। धेरै संख्यामा चौडा फुटपाथ बनाउने। नयाँ रुटमा पैदलमार्ग थप्ने।
२. नयाँ पूर्वाधार बनाउँदा पैदलयात्रु र साइकल चलाउनेका निम्ति बाटो छुट्टयाउने। यसले लन्डनको ‘पैदलयात्रा गाइड’ को मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ।
३. विद्यार्थीलाई हिँडेरै स्कुल जाने सुविधा व्यवस्थापन गर्ने। सुरक्षित पैदल मार्गबाट स्कुलसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने स्कुलको संख्या दोब्बर गर्ने। स्कुल क्षेत्रमा २० माइल प्रतिघन्टा भन्दा बढी गतिमा सवारी हाँक्न रोक लगाउने। कारमुक्त दिनहरू घोषणा गर्ने र निश्चित समयमा गाडीका लागि सडक बन्द गर्ने।
४. हिँड्न र बाटो काट्न सहज र सुरक्षित हुने गरी नयाँ प्रविधिका ट्राफिक संकेत राख्ने। सडकमा उत्पन्न हुने भिडभाड पनि व्यवस्थापन गर्ने।
५. लन्डनका अन्डरग्राउन्ड स्टेसनमा पैदलयात्रु निम्ति नयाँ सञ्जाल बनाउने।
यो योजनाका केही कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन्, जसले लन्डनका केही स्थानमा अहिल्यै सुरक्षित पैदलयात्रा सम्भव भएको छ।
हाइबरी कर्नरमा नयाँ खुला स्थान र बाटो काट्ने सुविधा बनाइँदै छ। ओल्ड स्ट्रिटले सन् २०१९ देखि काम सुरु गर्नेछ। स्वीस कटेज र किङस्टनमा पनि सुरक्षित पैदलयात्रु मार्ग बनाइँदैछ।
लन्डनमा ‘वाकिङ एक्सन प्लान’ पहिलोपटक सुरु गरिएको हो। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका योजनामा विद्युतीय सवारी संख्या बढाउने पनि छ। यो वर्षबाट डिजेल ट्याक्सीलाई लाइसेन्स नदिने नीति पनि अपनाइएको छ।
यसबारे ‘वाकिङ एन्ड साइक्लिङ’ आयुक्त नोर्मनले भनेका छन्, ‘लन्डनका मान्छेलाई घरमै कार छाडेर हिँड्न मनलाग्ने बनाउन सके यहाँको वायु प्रदूषण धेरै कम हुनेछ। जनसंख्यासँगै बढ्ने भिडभाड पनि कम हुन्छ।’